မြို့ရွှေမန်းက သတင်းစကား (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cover Faces » မြို့ရွှေမန်းက သတင်းစကား (၂)
မြို့ရွှေမန်းက သတင်းစကား (၂)
Posted by JUDGEMENT on Sep 17, 2011 in Cover Faces, Myanma News, Myanmar Gazette | 15 comments
မြို့ရွှေမန်းက သတင်းစကား Post ကိုတင်တုန်းက တော်တော် များများလက်ရှောင်ကြမယ်ထင်ထားတာ။
အခုကြတော့ တော်တော့်ကို စိတ်ဝင်စားကြလို့ပျော်ပါတယ်။
အဲ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ချဲဘုန်းကြီး၊အရက်သမားဘုန်းကြီးတွေ အကြောင်းကို တင်ပြပေးဖို့ အချက်အလက်တွေကို
ပြည့်စုံအောင် စုနေပါတယ်။ပြီးပြီးရော မတင်ချင်ပါဘူး။မဆိုင်တဲ့ သူတွေမပါရအောင် စီစစ်နေတာပါ။
ဒီကြားထဲ JUDGEMENT တို့တွေ့တွေ့နေရတာတွေအမြင်မတော်လို့ ပြောရဦးမယ်။
အထူးသဖြင့် လိင် စိတ်ကြွဆေး တွေပေါ့ ။ လူငယ်တွေလက်တဲ့ စမ်းကြလွန်းလို့ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းတွေလဲ ဖြစ်ပေါင်းများနေပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လကတောင် Gazette မှာ ရေးထားတာ။ရေသန့်ထဲ ထဲ့တိုက်
လို့ဆိုတာလေ။ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ အမြင်မတော်တာဖြစ်ကုန်ဆိုပဲ။အခုအချိန်က အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ရာသီလေ။
ပိုဆိုးနေတာပေါ့။ဒါတွေကို ဖမ်းတယ်လို့သတင်းထွက်နေပေမဲ့ တကယ်ရောဖမ်းရဲ့လားပေါ့။မဖမ်းပါဘူး။ဆိုကြပါစို့။
၈၄ – လမ်းဗျာ။ညကိုသွားကြည့်လိုက်။ညစ်ညမ်းခွေ (အပြာကား) လိုသလောက်ရတယ်။
အရင်က JUDGEMENT က စာအုပ်အဟောင်းတန်းမှာ သွားသွားပြီး စာအုပ်သွားရွေးပေမဲ့ အခုတော့
စာအုပ်အဟောင်းတောင် သွားမ၀ယ်ရဲတော့ဘူး ။အများအမြင်ဆေးလာဝယ်တယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့။
လိင်စိတ်ကြွဆေးဗျာ။ ယောင်္ကျားလေးသုံး ၊ မိန်းကလေးသုံး အကုန်ရတယ်။
ဘယ်မှာလဲ ဖမ်းလို့။အများမြင်အောင် တစ်ယောက်စ ၊ တစ်ဆိုင်စလေး ( ရဲကြေးမပေးတဲ့ဆိုင် )လောက်ဖမ်းပြပြီး
မှု့ခင်းဂျာနယ် ( ရဲ့အောက်ဆွဲ စာစောင် ) လောက်မှာ ထဲ့ပြတာပါ။
အဲဒီ့ မှု့ခင်းဂျာနယ် ၊ မှု့ခင်း ရှူထောင့် စတာတွေကလည်း ရဲမိတဲ့အမှု့လောက်သာ ဖားပြောလေးပြောပေးရေး
ပေးရတာကိုး။ တကယ်ဖြန့်နေတဲ့ ဆေးဆိုင်ကြီးတွေ ( ဆေးတိုင်းတိုင်းနီးပါး) ဘယ်မှာ ဖမ်းလို့လဲ။
မ၀ယ်တတ်ရင်တောင် ဆိုင်ကြီေးတွက သူတို့ကိုယ်တိုင် စပ်ရောင်းသေး။အမြတ်က တော်တော်ကြမ်းတာကိုး။
ဒါတွေကိုကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေကသုံး မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်နေကြကုန်ပြီလေ။ Gazette ထဲတောင်ဖတ်ရသေး။ နော်ဗျာ။ ပြီးတော့ ပြောကြတော့ မိန်းကလေးတွေက တစ်ဖက်သတ်ပဲ။
ကောင်လေးတွေထဲ့တိုက်လို့ သူတို့ မိန်းကလေးတွေ စိတ်ကြွပြီးမဖြစ်သင့်တာဖြစ်ကုန်ကြဆိုပဲ။
JUDGEMENT တို့ ကိုယ်တွေ့ ( မျက်မြင် )ကိုပြောပြမယ်နော်။
အခုက စုံတွဲသောက်ရတဲ့ဆေးတွေတောင် ပေါ်နေပြီဗျ။
( ၀မ်းနည်းရမှာလား – – ၀မ်းသာရမှာလား မိသိန်းကြည်ပေါ့နော် ၊ JUDGEMENT တို့ကတော့ ၀မ်းသာပေါင်ဗျာ)
သိပ်မကြာသေးဘူး။ဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ချောင်းဆိုးလို့ ဆေးဝယ်တော့ စောင့်နေတုန်း
ကောင်လေးတစ်ယောက်က ဟိုဆေးတစ်ကဒ်လို့ပြောပြီး ဆိုင်ရှင်အမကြီးဆီမှာဝယ်ပါတယ်။
JUDGEMENT တို့ကြည့်နေတုန်း သံဗူးလေးကိုရောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ အဲဒီ့ ဆိုင်ရှင်အမနဲ့ခင်နေတာမို့ ဘာဆေးလဲ ဆိုတော့ ကောင်လေးက ဗြောင်ပဲဖြေပါတယ်။
ဟာ – အကိုမသိဘူးလား။ ဒီဆေးသောက်ထားမှ မဟုတ်ရင် သူတို့ဆေးရှိန်တတ်နေရင်
ကြာကြာမဆွဲနိုင်ဘူးတဲ့။သူတို့က ဆေးသောက်ပြီးရင် ချက်ချင်းတတ်တာတဲ့။
JUDGEMENT တို့လည်း ကျောင်းသားပါ။ရည်းစားနဲ့သွားချိန်းတာ လိင်စိတ်ကြွဆေးဆောင်ပြီး
သွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့နော်။ကြားလို့ကောင်းကြသေးရဲ့လား။ ခေတ်ကြီးက —-ခေတ်ကြီးက ။
ဒီတော့ အဲဒီ့ဆိုင်ရှင်အမကိုမေးကြည့်ပါတယ်။တရားဝင်ဆေးဝါးလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့။
နယ်စပ်(တရုတ်) ဖက်က၀င်တာတဲ့။တရားဝင်ဆေးတွေက တစ်ကြိမ်ပဲကောင်းကောင်း ဆက်ဆံလို့ရပြီး တရုတ်ဆေးတွေက (၅)ကြိမ်ကနေ ( ၈) ကြိမ်အထိရတယ်ဆိုပဲ။
ဒါကြောင့် ရန်ကုန်က Model လေးတွေ ဟိုဟာဒီဟာ ( က – က – ပ – ပ ) တွေပါဖြစ်ကုန်တာနေမှာနော်။
ပြီးတော့ ကောင်လေးက Angel တစ်ပုလင်းတဲ့ ။ဆိုင်ရှင်အမက ပုလင်းသေးသေးလေးကိုရောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီတော့ အဲဒါလေးကိုတောင်းကြည့်တော့ အထဲက အရည်တွေကကြည်ကြည်လေး။စာဖတ်ကြည့်တော့
5 ml is respond for 30 Minutes. 10 ml is respond for5Minutes , and then as you want to your
girl friend or sexual partner . လို့ရေးထားပါတယ်။
အမလေး – လေး – – – – ကြောက်စရာကြီးနော်။ကောင်လေးက ပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်။
ဒီတော့ စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။သဘာဝလွန်အချစ်ကဘယ်လောက်ကောင်းလို့လဲ။နောက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်ထဲမှာပါ Hotel တစ်ခုမှာ Chinese စုံတွဲ နှစ်တွဲ Day တစ်ခန်းထဲ ယူတယ်တဲ့ ။ International Hotel ကြီးမှာပါ။မန္တလေးမှာ International Hotel (3) လားပဲရှိတာ စုံစမ်းကြည့်ဗျာ – – နော် ။
ပြီးတော့ ကောင်လေးတွေရော ကောင်မလေးတွေပါ အဲဒီဆေးကို သောက်ပြီးဆက်ဆံကြတာ။ ၀န်ထမ်းတွေတောင်
သိကုန်တာကို အရှက်မရှိ ဂရုတောင်မစိုက်ဘူးတဲ့။
ပြီးတော့ဗျာ ကြားလို့တောင် မကောင်းဘူး ။ ကိုယ့်ဆော် — — သူ့ဆော်တောင် ချိန်းပြီးဆွဲကြသေးဆိုပဲ။
မိန်းမကောင်းတွေဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ ကောင်မလေးတွေကတော့ သန့်သန့်လေးတွေတဲ့ ။
Chinese တွေနော်။ ထုံးစံအတိုင်း လက်တစ်လုံးရယ် One – Quarter ရယ်ပေါ့ဗျာ။သွေးပူရင်ဆူစေတဲ့အလှပေါ့။
သူတို့ အတွဲတွေ Check Out လုပ်ပြီးပြန်သွားမှ ၀န်ထမ်းတွေက အဲဒီ့ ဆေးပုလင်းလေးတွေ ၊ ဆေးကဒ်လေးတွေ
အော် – ဘ၀ ဘ၀ လို့သာဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်။သူတို့ချောင်းကြတာတော့ ကောင်မလေးတွေကကို ဆေးသောက်သလို ကောင်လေးတွေကိုလည်း အတင်းတိုက်ကြဆိုပဲ။ နေရာချင်းသာ လဲလိုက်ချင်ပါရဲ့။
အလကားပြောတာနော်။ကဲ ဆိုကြပါစို့ ။
အမျိုးကောင်းသားသမီးလေးတွေကို မပြောလိုပါဘူး။ဒီဆေးတွေသောက်ပြီးမှ ချစ်တာကိုသက်သေပြကြလေရော့သလား။
ဆိတ်ကွယ်ရာမှာတွေ့ရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ စိတ်ရဲ့ သဘာဝကိုသိရင် မိန်းကလေးတွေကလည်း ဆင်ခြင်သင့်သလို ယောင်္ကျားလေးတွေက လည်း မိန်းကလေးတွေရဲ့ဘ၀ကို နှမညီမသဖွယ်ကိုယ်ချင်းစာသင့်ပါတယ်။ တစ်ခဏသာယာမှု့ကြောင့် ဘ၀တစ်ခုလုံး မရင်းရစေချင်ပါဘူး။
ပြီးတော့ NGO တွေ ၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းတွေပြောသလို မနေနိုင်လို့ သမီးရည်းစားတွေနေရင်တောင်
Condom သုံးသင့်ပါတယ် – ဆိုသလိုပေါ့။ HIV ကို လည်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ လူပျို ၊ အပျိုစင် ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ကြဖို့ပါပဲ။
အင်း – အဲဒီ့ဆေးရည်ကြည်လေးကို အိမ်ကညီမ ၊ တူမလေးတွေများ သောက်မိခဲ့ရင် – ——–
ပြီးတော့ JUDGEMENT တို့သောက်တဲ့ အအေးတို့ မုန့်တို့ထဲများ အဲဒီ့ Capsule လေးတွေထဲ့တိုက်ခံရရင် – –
အဟေး – – ဟေး တွေးရင် ရင်မောလိုက်တာနော်။
ဘယ်လိုများ ဖြေရှင်းရပါလိမ့်နော် – – – -တွေးမိတိုင်းရင်မောရပါ့ — -ရင်ခုန်ရပါ့ – – -ရင်တုန်ရပါ့ – – – –
အဲ ပြောရအုံးမယ် – အဲဒီ့ယောင်္ကျားလေးတွေသောက်တဲ့ စိတ်ကြွဆေးကို JUDGEMENT ကနောက်တစ်နေ့
ဆေးဆိုင်မှာ သွားပြီးပြန်မေးတော့ ဆေးဆိုင်က အဲဒီ့ တံဆိပ် ဆေးမှာ အမျိုးမျိုးရှိတယ် – – –
စုံတွဲသောက်ဆေးလား ။ ကြီးထွားဆေးလား – ကြာဆေးလား – ခဏခဏဆေးလားတဲ့ – –
JUDGEMENT လဲ ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ တာနဲ့ ငှဲ – ငှဲ – ငှဲ ဒီအတိုင်းပဲပြန်လာပါတော့တယ်။
ရောင်းတဲ့သူက လမ်း(၃၀) က ကောင်မလေးပါ။ သူကတော့ အေးဆေးပါ ။ JUDGEMENT ကပဲ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း
(တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့နော် ဆေးကဒ် / ဆေးပုလင်း ပုံလေးပါ တင်ချင်လို့ပါ )
JUDGEMENT က ဆေးဝါးနဲ့ပါတ်သတ်ရင် ကိုယ်တိုင်လဲ သိပြီး အလွန်ဂရုစိုက်စေချင်ပါသည်။
JUDGEMENT က အခုအချိန်အထိ လူပျိုစစ်စစ်လေးပါ။ ( ကြော်ငြာ ဖြစ်ပါသည် ။ )
အဲဒီ့ဆေးရဲ့ ဗူးခွံမှာ ရေးထားတာက One Capsule is include 3000mg တဲ့ဗျ။
ဒီတော့ နာမည်တူ ဆေးကို Internet ပေါ်မှာ ရှာကြည့်တော့ One Capsule is 300 mg ပဲပါတယ်။
သူက US ကသွင်းတာပါ။ဒီမှာ မသွင်းလို့လဲ JUDGEMENT တို့ဆရာ – ဆရာဝန်တွေပြောပါသည်။
ဒီတော့ နယ်စပ်ကဆေးတွေက ဘာတွေထဲ့ထားမှန်းမသိပဲ လုပ်ထားတော့ ကြောက်စရာအလွန်ကောင်းမှာပါ။
မသောက်သင့်ကြပါဘူး။ အရင်က ပီကေ ၊ ကော်ဖီ အခုက စုံတွဲ သောက်ဆေးဆိုတော့ကာ – ဘယ်လိုလုပ်ပြီး
ဒီဆေးတွေကို အရေးယူကြမလဲဆိုတာကို အားလုံးဝိုင်းပြီးဆွေးနွေးကြဦးစို့ဗျာ။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ အနာဂါတ်အတွက် စကားဝိုင်းပေါ့ ။
ငယ်ငယ်တုံးကဖတ်တဲ့ ရှား ရဲ့ ခရမ်းရင့်ရင့်ပင်လယ် ( JUDGEMENT အကြိုက်ဆုံး ) စာအုပ်ထဲက ရေးထားတာ
လေးကို ရွာထဲမှာ ဖတ်စေချင်လို့ နော်။မှတ်မိသလောက်ပြန်ရေးပေးလိုက်တယ်။စာသား တွေ တူချင်မှတော့ တူလိမ့်မယ်နော်။
လောကပါလတရားတွေကိုချိုးဖောက်ပြီး ပျော်ခဲ့ရတဲ့ မင့်ရဲ့အပျော် တွေဟာ ဘ၀နဲ့ရင်းလိုက်ရတော့
မင်းတန်တယ်ထင်သလား။တန်သလားတဲ့။ လူတွေစောင့်စည်းလိုက်နာရမဲ့ လောကပါလတရားတွေကို
ချိုးဖောက်ရမှ မင်းတို့လိုချင်တဲ့အပျော်ကိုရမယ်ထင်ထားသလား ။
ဆိုတာလေးပါ။ဇာတ်လမ်းမှာ သူဋ္ဌေးသမီးက ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ Club မှာ ဗိုက်ကြီးပြီး အဖေသူဋ္ဌေးကြီး
ရဲ့ ၀န်ထမ်းနဲ့လင်ကောင်ဖော်ခိုင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ အဲဒီ့မှာ ပြောထားတဲ့စကားလေးပါ။ကောင်လေးက ဖြူစင်တဲ့
ချစ်ခြင်းကို သရုပ်ဖော်ပြီး သွေးမတော်တဲ့ သမီးလေးကိုပါစောင့်ရှောက်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ JUDGEMENT မှတ်မိသေးသလောက်ရေးပြပေးလိုက်တာပါ။အခုခေတ်ဆိုရင် ရှား ဘာတွေရေးမလဲတောင်မသိတော့ပါ။
(ရှားရဲ့ ခရမ်းရင့်ရင့်ပင်လယ်စာအုပ်ရှိသူများ ဝေမျှပေးစေလိုပါသည် )
အဲဒီ့ခေတ်က လိင်စိတ်ကြွဆေးတွေမပေါ်သေး လို့ ထင်ပါသည်။ပေါ်ရင်တောင်ဒီလောက်ခေတ်မစားသေး
ဆေးတွေကြောင့် ဆိုပေမဲ့ လူကိုယ်တိုင်လဲ စိတ်ပါနေလို့ ၊ ကိုယ့်ကို ကိုယ် တန်ဖိုးမထားတာလဲပါပါလိမ့်မယ် ။
အခုလည်း တရားဝင်တော့ အပျိုပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ တွေ့သမျှနဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့ အချို့သော လောကပါလ တရား
ချိုးဖောက်နေကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေ သိသင့်ဖို့ပါ . . . အားလုံးကို မဆိုလိုပါ . . . . .
ရန်ကုန်သွားကျောင်းတတ် ၊ နယ်ကလာ မန္တလေးမှာ ကျောင်းတတ် အိမ်ပြန်တော့ – – – – – –
အပျိုမစစ်တော့တဲ့ဘ၀ . . . တွေးမိရင် ရင်နာတတ်ပါစေ . . . . . . . . . . .
အမှားကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါစေ . . . . . .
ဖတ်တဲ့အတွက် တစ်ရွာလုံး ကို ကျေးဇူးဗျာ။
View all posts by JUDGEMENT →
အရှက်ကို မဲ့သွားကြပီလား။ဆေးနာမည်လဲ မပါဘူးနော်။
JUDGEMENT ရေ လုပ်လိုက်ရင် အမှန်တွေကြည့်ပဲ။ ချထားဗျို့ ။ကို kai ပြောတဲ့ Citizen Journalist တွေ
လိုနေတဲ့ အချိန် တစ်တပ်တအားပေါ့ဗျာ။သားသားလဲ ကြောက်တယ်ဗျ။ အဲဒီ့လိုအဖြစ်ခံရမှာကို ။
ဒါတွေကိုလည်း ဖမ်းသင့်တာပဲ ။လောင်းကစားထက်ဆိုးတာပေါဗျာ။အမျိုးကောင်းသား/အမျိုးကောင်းသမီး
ကဲ ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ အကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ အရေးယူကြရအံ့နည်း . . . . .
ဆေးနာမည်က MAXMAN for SEX Capsules နဲ့ MAXWOMAN for SEX Capsules ပါ။အမှန်အကန် US
ကလာတာရှိပေမဲ့ အရမ်းဈေးမြောက်ပြီး အခုရောင်းနေတာတွေက China ကတွေပါ။
သောက်ဆေးရည်က Angle အမည်နဲ့ပါ။သူကပိုဆိုးတယ်လို့သိရပါတယ်။
လုံးလုံးမနေနိုင်တဲ့ဘ၀ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတိပြုသင့်ပါတယ်။အရောင် အနံ့ လုံးဝမရှိပါ။
US က၀င်တဲ့ဆေးက Side Effect လျော့ပါးစေတယ်လို့ ဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် မသွင်းသင့်ပါ။
ေ-ာက်တလွဲတွေကို.. စံနစ်တကျနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာ .. မြန်မာတွေတော်တော်ထူးချွန်နေပြီ…။
အခုတော့.. နိုင်ငံရေးရဲ့အပေါ်ကဟာကို.. လက်ညိုးထိုးရမယ် သိလာတယ်.။
သဘာဝဘေးတွေ၊ လူလုပ်ဘေးတွေအဖြစ်များဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်နေပြီလေ…။ ကြိမ်စာမိနေပြီ။
ဖြစ်သင့်..လုပ်နိုင်တဲ့ဘောင်… သဘာဝကို လွန်ဆန်လုပ်နေကြတာက.. ပြဿနာတော်တော်တက်နိုင်ပါတယ်..။ ပြောပြောနေကြတဲ့.. မျိုးကန်းတယ်ဆိုတာ.. အဲဒါမျိုးပဲ..။ မျိုးကန်းသွားကြမှာပါ..။
ဒီဆေးတွေရဲ့ side effectsကအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်..။
ပြောရရင်.. ယူအက်စ်မှာ ဒီဆေးရှာဝယ်လို့မရပါဘူး..။
viagra နဲ့ cialis လောက်ပဲဆိုင်တွေမှာရှိတာ..။ ဘယ်လူငယ်မှလည်း.. သွားမ၀ယ်ဘူး..။
Max Woman Sex Drops ကိုအင်တာနက်စစ်ကြည့်တော့.. အားလုံးလိုလို တရုတ်ပြည်ကလာနေတာတွေ့ရတာပဲ..။
အဲဒီထဲ ပါတဲ့ဓါတုဓါတ်တွေတော့ မသိဘူး.. ဒါပေမဲ့.. အရင်တခါ တင်ဖူးတဲ့.. Spanish fly နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာတော့ တွေ့ရတယ်.။
side effectsကို အောက်မှာ ၀ိကီက ကူးတင်ပေးထားပါတယ်..။
ဆေးသုံးရင်.. ဘာဖြစ်မလည်းဆိုတော့… ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်..။ တခါ..၂ခါ..၄-၅-၁၀ ခံစားလို့ရမယ်..။
ဒါပေမဲ့.. အဲဒီယောက်ျား.. အသက်အရွယ်နည်းနည်းရတာနဲ့.. မျိုးကန်း-ပန်းသေနေဖို့ သေချာသလောက်ပဲ..။
မိန်းကလေးလည်း.. သားအိမ်ပြသနာ၊ ကလေးမရနိုင်တာ၊ ရင်သားကင်ဆာ စတဲ့ ဟိုမုန်းနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့.. ရောဂါတွေဖြစ်မှာပဲ..။
အဲဒီဆေးမူရင်းက.. နွားတွေမျိုးစပ်ရင် သုံးတဲ့ဆေးတဲ့..လေ။
အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ၊
The Spanish fly is an emerald-green beetle in the family Meloidae, Lytta vesicatoria. It is 15 mm to 22 mm long and5mm to 8 mm wide, and lives on plants in the families Caprifoliaceae and Oleaceae. The beetle contains up to 5% cantharidin which irritates animal tissues. The crushed powder of Spanish fly is of yellowish brown to brown-olive color with iridescent reflections, of disagreeable scent and bitter flavor.
Spanish fly, or cantharides as it is sometimes called, is often given to farm animals to incite them to mate. The cantharides excreted in the urine irritate the urethral passages, causing inflammation in the genitals and subsequent priapism. For this reason, Spanish fly has been given to humans for purposes of seduction. It is dangerous since the amount required is minuscule and the difference between the effective dose and the harmful dose is quite narrow. Cantharides cause painful urination, fever, and sometimes bloody discharge. They can cause permanent damage to the kidneys and genitals.
FDA warns ‘Spanish Fly’ can be lethal
The Food and Drug Administra-tion (FDA) yesterday warned of the potentially fatal side-effects of “Spanish Fly”,aso-called aphrodisiac reportedly used by Chiang Mai youngsters to increase their sexual desire.
Manit Arunakul, FDA deputy secretary, said Spanish Fly wasaderivative of cantharides,adrug the FDA is monitoring because no studies guarantee its safety.
“It takes hours for cantharides to become active. It makes the genitals swell and numb when users urinate, thus creating the myth that it stimulates sexual desire,” he said.
The drug is used to stimulate animals during breeding but it does not have the same effect on humans.
“It has potentially fatal side-effects such asaswollen urinary tract, convulsions, coma and heart failure,” he said.
Spanish Fly comes in liquid form and has no colour or scent so people should be careful that the drug is not mixed in with their drinks.
He added that no drug exists that can stimulate sexual craving, although sildenafil can help men to maintain an erection long enough to have sexual intercourse. “It’s worrying that there are more and more products available at Bangkok’s night entertainment venues that claim to stimulate sexual desire,” Manit said.
အဲ့ဒါ ပဲ… သူကြီးရေ… အနော်တို့ဆီမှာ အဲ့ဒီလို ကြော်မကောင်းကြားမကောင်း မတွေ့ချင်မမြင်ချင်အဆုံးတွေ ဖြစ်နေလို့ တခါတခါ ယဉ်ကျေးမှုတွေ အစဉ်အလာတွေ ထထအော်နေရတာ . ကိုယ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ။ ဘယ်သူကမှတော့ မြင်သမျှတွေ့သမျှတွေကို ဆီလို အပေါက်ရှာပြီး ပြောနေပါ့မလဲ ။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး လူမုန်းဘယ်ခံချင်ပါ့မလဲ။
ဒီမှာ က နိုင်ငံကသာ အမေရိကားနဲ့ ယှဉ်ရင် တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ နှစ် ၁၀၀ မကလို့ ၂၀၀ နောက်ကျချင်နောက်ကျမယ်။ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ ဒီလို မျိုးတွေမှာ တော့ ခေတ်ရှေ့မှာ သူများထက်ကို လွန်ချင်တိုင်း လွန်နေတာ ။ ဘေးမကြောက်ရောဂါ မကြောက်လေ။
” တိုင်းပြည် တပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ကြည့်ချင်ရင် အခုခေတ် အဲ့ဒီတိုင်းပြည်က လူငယ်တွေ ဘာလုပ်နေသလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ပါတဲ့ ”
ကဲ ဘယ့်နှယ်လုပ်ကြမလဲ။ လူတိုင်းကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူငယ်အများစုက အဲ့ဒီလိုတွေလေ။ လူငယ်တွေကို တားလို့ မရတော့ပါဘူး။ ခေတ်ရဲ့ ရေစီးကြောင်းအပြောင်းအလဲကို မလွန်ဆန်နိုင်တော့ရင်တော့ လုပ်နိုင်တာကတော့ ပညာပေးလို့ မြင်မိပါတယ်။ အလယ်တန်းလောက်က စလို့ ကျောင်းတွေမှာ sexual reproduction ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သင်။
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေရယ် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုပါ သေသေချာချာ ပညာပေးပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ပေးရမှာပါ။ ဆေးဝါးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း သိအောင်ပြောပြရတော့မှာပါ။ ပညာပေးကို မိဘဆရာ ပူးပေါင်းပြီး ရှက်စရာလို့ သဘောမထားပဲ လုပ်ကြရတော့မှာ လို့ထင်ပါတယ်။ မလုပ်လို့ကို မရတော့တဲ့ အနေအထားရောက်နေပါပြီ။ ပြောရရင် စိုးရိမ်ရေမှတ်ပါ။
ဒါကြောင့်မို့ အနော်က မြန်မာဓလေ့မှာ မိန်းကလေးဆိုရင် အိမ်ထောင်ပြုမှသာ ကိုယ့်ရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်တာ။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ဆို တာ မြန်မာ့ အစဉ်အလာပါ ထိန်းသိမ်းကြပါ။ ယဉ်ကျေးမှု ယဉ်ကျေးမှု လို့ အသံကောင်းဟစ်ပြီးအော်နေတာ မဟုတ်ဘူးဗျို့ သူကြီးရဲ့ ။ မမြင်ရက် မကြည့်ရက်တော့လို့ မခံစားနိုင်တော့လို့ အမုန်းခံပြီးပြောနေတာ။ သိတာပေါ့ ဒါမျိုးတွေ ပြောရင် အမုန်းခံရမယ်ဆိုတာ။
သူကြီးက USA မှာ အနေကြာတော့ ဒါမျိုးတွေကို သိပ်မဆန်းဘူးလို့ ထင်ပေမဲ့ အဲ့ဒီမှာက ပညာပေးကို ကျောင်းမှာ ကတည်းက သေသေချာချာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သင်ကြားခဲ့ကြလေတော့ ရောဂါကူးစက်နှုန်းလည်း နည်းတယ်။ ထိန်းနိုင်ကြတယ်။ ဒီမှာက ပညာပေးလည်း မရှိလေတော့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြီး မမြင်ဘူး မူးမြစ်ထင်ပြီး ကြာရင်မျိုးကန်းတော့မှာ။ အဲ့ဒါကြောင့် သူကြီးလည်း လာလာ မြှောက်မပေးနဲ့ ။
…. နောက်ဆို အဲ့ဒီ ကလေးတွေ နေရာမှာ ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေ ရောက်လာတဲ့ အခါ ဘယ်နှယ့် လုပ်ရမလဲ ..ဘယ်လို ကာကွယ် ကြရမလဲ ဆိုတာပဲ အားလုံးဝိုင်းပြီး စဉ်းစားကြရတော့မှာ…………..
နိုင်ငံ တနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ၃ ချောင်းထောက်ထားတဲ့ ဖိုခနောက်လို ထောက် ၃ ချောင်းလုံး ညီမှ တပြိုင်နက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာပါ။ တခုခုမှာ ကျိုးနေလို့ ကတော့ ထမင်းအိုး မှောက်မှာပါ။ ရွှေပြည်တော်ကလည်း မျှော်လေတိုင်းသာ ဝေးလို့နေမှာပါ။
လင်မယားကြားက လိင်ဆက်ဆံမှု ဟာ မရှိမဖြစ်လို့တော့ ပြောလို့မရပေမဲ့ မရှိမဖြစ်နီးနီး အရေးပါပါတယ် သားသမီး၊နားလည်မှု၊နွေးထွေးမှု စတာတွေအတွက်ပေါ့
တစ်နေ့ရွှေဥတစ်လုံးဥနေတဲ့ ငန်းလိုပေါ့ အချိန်တန်မှ တစ်နေ့တစ်လုံးယူရမဲ့ကိစ္စ အခု အချိန်မတန်ခင်ကတဲက တစ်ခါထဲ သတ်လိုက်သလို ဖြစ်နေကြတာပဲ မှားမှန်းသိချိန် ပြန်ပြင်လို့ မရနိုင်တော့ဘူး
လောကကြီးမှာ အရာရာဟာ သဘာဝအတိုင်း အကောင်းဆုံးပါ သဘာဝကိုဆန့်ကျင်လိုက်တာနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ အနဲအများပေါ်မူတည်ပြီး ပေးဆပ်ရမှုလဲ အနဲအများရှိမှာပဲ
နွားမျိုး စပ်တဲ့ ဆေးသောက်တယ် ဆိုတော့ နွားဖြစ်တာ မဆန်းဘူး။ကောင်းတယ်။
ကြားရ နားဝမသက်သာပါလား ကွယ်ရို့ ။
ဆေးတွေကို ဖမ်းတဲ့အပြင် တည်းခိုခန်းတွေကော KTVတွေကော မာဆတ်တွေကိုကော အပြတ်ရှင်းရမှာ။
အရင်တုန်းကလို ဖမ်းလိုက် မဖမ်းလိုက်လုပ်လို့ကတော့ ရာသီစာလို အချိန်တန်ပေါ်လာမှာပါပဲ ကွယ်။
အရက်သောက်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေအကြောင့်ရေးမယ်။ဒီမယ် ကိုယ့်လူ သားသုံးသားရှောင်မှနော်။
ဘုန်းကြီး၊ကျောင်းသား၊စစ်သား တဲ့ ကျုပ်တော့ ကြောက်သဗျို့။
နာမည်နဲ့ လိုက် အောင် ပြည့်စုံသူဆိုတော့ ဆေးတော့မလိုသေးဘူး။
တစ်ခုခု ဖြစ်လာမှ …. မိုးကြိုးပစ် ထန်းလက်နဲ့ ကာသလို ဘာမှ ကြိုကြိုတင်တင် မတားဆီးနိုင်ပါလား ကွယ်တို့….. ဘယ်မှာလဲ အခြေခံဥပဒေ
အင်း အခုမှပဲ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေ သိရတယ်
ုအိမ်ထောင်သည်တွေ ချင့်ချိန်ပြီး သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာ လေးတွေလည်း ရှိချင် ရှိမှာ ပေါ့
တခါတလေ ကို က မစွမ်းနိုင် အိမ်ထောင်ဖက်က ဆဒ္ဒရှိနေရင် အရေးပေါ် သူ့ ဆဒ္ဒ လေးတော့ ဖြည့်လို့ ရတာ ပေါ့ ခေတ်အဆက်ဆက်က ယောကျာ်းလေးတိုင်းက အဲဒီဘက် မှာ စူပါမန်း ဖြစ်ချင်ကြတာတော့ အမှန် ပဲဗျ